Vanyori vakuru vaJuly 4 Shaw, Machado, Huxley uye Matute | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Fikisheni yesainzi, Vanyori, Fantasy, Novela, Nhetembo, Theater
Iko hakuna mazuva mazhinji pakarenda kwaunofanirwa kupemberera akawanda kwazvo mazuva ekuzvarwa evanyori. Asi 26 yeJuly Icho chimwe. Nhasi vanogovana mazuva ekuzvarwa vanyori vakuru vana, muIrish, muChirungu uye vaviri veSpanish, vane zvinopfuura mabasa akajeka uye anozivikanwa. Ivo ndiGGeorge Bernard Shaw, Aldous Huxley Antonio Machado naAna María Matute. Mukurangarira kwake ndinosarudza mamwe zvirevo zvake nemabasa ake kuvarangarira.
1 26 yeJuly
1.2.1 Kune yakaoma elm
Shaw akaberekerwa mukati Ireland en 1856. Ndiye chete munyori akakunda iyo Mubayiro weNobel muMabhuku muna 1925 uye Oscar weFirimu Academy yeakanakisa script ye Pygmalion in 1938.
Hupenyu hausi hwekuzviwana iwe. Hupenyu hunoedza kuzvisika.
Isu tinodzidza kubva pane zvakaitika kuti varume havana kumbodzidza chero chinhu kubva pane zvakaitika.
Vechidiki vanopambadzwa pane vadiki.
Rusununguko zvinoreva mutoro. Ichi ndicho chikonzero varume vazhinji vanozvitya.
Murume haamire kutamba nekuti anokwegura. Anokwegura nekuti anomira kutamba.
Antonio Machado akaberekwa muna Chikunguru 26, 1875 en Sevilla. Yenhengo dzinomiririra foni Chizvarwa che98, basa rake nderimwe remakanyanya kuzivikanwa uye anozivikanwa. Pamusoro penhaka huru yemavhesi asingafe, mabasa ake anomira pachena Solitudes o Minda yeCastile.
Ndasarudza nhetembo iyi kunyanya nekuti chikamu ndangariro yangu yekutanga yenhetembo. Mumba medzimba yasekuru vangu a yematehwe padanda remuti. Ini ndaiverenga ndichidzokororazve ndobva ndazotarisisa kune elms mubindu panze, uye ndaifara kuti hapana kana rimwe chete raive rakaoma.
Kune yakaoma elm
Kune iyo yekare elm, yakakamurwa nemheni
uye muhafu yayo yakaora,
nemvura yaApril uye zuva raMay
mamwe mashizha akasvibira abuda.
Zana ramakore zana elm pachikomo
iyo inonanzva iyo Duero! Tsvuku tsvuku
inoshatisa kuchena kwakachena
kune hunde yakaora uye ine guruva.
Izvo hazvizove, kunge kuimba kwepopuri
vanochengeta nzira nemhenderekedzo,
inogarwa nehusiku husiku husiku.
Mauto emasvosve akateedzana
iri kukwira kumusoro kwaro, uye nemukati maro
madandemutande anoruka ndebvu dzawo dzakachena.
Ndisati ndakuwisira pasi, Duero elm,
nedemo anotema, uye muvezi
Ini ndinokushandura iwe kuita mane bhero,
ngoro yenjodzi kana joko rengoro;
usati watsvuka mumba, mangwana,
kupisa kubva mune imwe nhamo inosiririsa,
dutu risati rakuendesa pasi
ndokugura mweya wemakomo machena;
rwizi rusati rwasundidzira kugungwa
elm, ini ndoda kuona mune yangu portfolio
nyasha dzebazi rako rakasvibirira.
Mwoyo wangu wakamirira
zvakare, kune chiedza uye kuupenyu,
chimwe chishamiso chematsutso.
Huxley akaberekerwa mu 1894, muSurrey, mumhuri ine tsika yakakosha yenjere. Akadzidza kuEton uye, kunyangwe achitambura ari mudiki kwazvo chirwere chakakomba izvo zvakamusiya asingaoni kwemwedzi gumi nemasere, akakwanisa kupora, asi pachinzvimbo chekudzidza zvemishonga akazopedza kudzidza Chirungu zvinyorwa. Akanyora bhuku rekutanga nezve ruzivo rwake kuti awanezve kuona, Unyanzvi hwekuona.
Asi pasina mubvunzo basa rake rakakura uye rine simba rinozivikanwa pasi rese idystopia Nyika inofara, yakanyorwa mumwedzi mina muna 4. A ramangwana uye kusava netariro yenyika, uko kunoratidzira nzanga inotongwa nemamiriro ekufunga uye panoshandiswa chinhu chinonzi soma kuitira hutongi.
Paramende, uchifunga kuti unoziva kuti chaive chii, wakapa mutemo unorambidza izvozvo. Iwo mafaera akachengetedzwa. Paive nekutaura nezvekusununguka, nezvazvo. Rusununguko rwekuziva uye kusuwa. Rusununguko kuva hoko yakatenderera muburi rekwere.
Mufaro wechokwadi unogara uchioneka wakashata uchienzaniswa nemubhadharo unounzwa nenhamo. Uye, hongu, kudzikama hakusi kungoshamisira sekusagadzikana. Uye kugutsikana nezvose hakuna huroyi hwekurwa kwakanaka nenjodzi, kana kujeka kwekurwa nemuedzo kana kupokana nechishuwo chinouraya kana kusahadzika. Mufaro haumbofi wakakura.
Mamiriro ezvinhu erufu anotanga pamwedzi gumi nemasere. Mwana wega wega anoshandisa mangwanani maviri svondo rega rega muChipatara cheKufa. Muzvipatara izvi vanowana matoyi akanakisa, uye vanopihwa ice cream yechokoreti pamazuva ekufa. Saka vanodzidza kugamuchira rufu sechimwewo chinhu chaicho.
Izvo zvakatemwa kubvisa rudo rweChisikigo, zvirinani pakati pevakaderera vakadzi; bvisa rudo rweMasikirwo, asi kwete tsika yekushandisa kutakurwa. Nekuti, hongu, zvaive zvakakosha kuti ivo varambe vachida kuenda kunyika, kunyangwe kana vaivenga. Dambudziko raive rekutsvaga rakasimba rezvemari chikonzero chekupedza kutakurwa pane kungofarira ma primroses nenzvimbo. Uye vakaiwana.
Asi ini handidi kunyaradzwa. Ndinoda Mwari, ndinoda nhetembo, ndinoda ngozi chaiyo, ndinoda rusununguko, ndinoda runako. Ndinoda chivi.
Ana María Matute akaberekerwa mu 1926 uye ndiye mumwe wevanyori vane mukurumbira veSpanish. Zvanga zviri nhengo yeRoyal Spanish Academy uye akanyora ese ari maviri manyore kuvakuru nevana. Mukundi wemubairo wakadai se Nadal, the Planet, Vatsoropodzi kana National Literature.
Udiki ndiyo yakareba nguva yehupenyu.
The Quixote Iri ibhuku rekutanga randakachema naro, pamwe nekufa kwaDon Quixote, kune zvese zvarinoreva: Kurega kupenga kuchinyangarika. Izvo zvinotyisa. Kukunda kwekunzwisisa kwakanaka.
Kunyorera ini harisi basa, kunyangwe basa. Iyo nzira yekuve munyika, yekuve, haugone kuita neimwe nzira. Iwe uri munyori. Zvakanaka kana zvakaipa, ndiwo mumwe mubvunzo.
Handina kumborega kubva paudiki hwangu, uye izvozvo zvinoripa zvikuru. Innocence ndeyeumbozha izvo munhu asingakwanise kutenga uye kwavanoda kukurova iwe kumuka.
Kutaura nezve izvo munhu zvaari kunyora kwakafanana nekushandira bhodhoro remafuta anokosha: hwema hwunobuda. Iwe unofanirwa kuichengeta yakavharwa uye kunyora, ndiyo yakanakisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » 4 vanyori vakuru vakazvarwa muna Chikunguru 26. Shaw, Machado, Huxley naMatute